यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा प्रहरीले धेरै काम गरेको छ :- प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री – मुलधार न्युज
Home > बिचार/अन्तरबार्ता > यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा प्रहरीले धेरै काम गरेको छ :- प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री
१७ भाद्र २०७५, आईतवार ११:२८
बलात्कारलाई प्रहरीको कार्य अक्षमतासँग जोडेर व्याख्या हुन थालेको छ, किन होला ?
प्रहरीको अक्षमता होइन, यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा पनि प्रहरीले निकै काम गरेको छ । अघिल्लो वर्ष १ हजार ४ सय ८० जबरजस्ती करणीका उजुरी परेका थिए । त्यसमा हामीले १ हजार ३ सय ६६ वटा मुद्दामा अभियुक्तलाई अदालतसम्म पु¥याएका छौं । बाँकी मुद्दाका विषयमा अनुसन्धान जारी छन् । तथ्यांकका हिसाबले प्रहरीकहाँ आएका उजुरीलाई सकभर अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नेसम्मका काम भएका छन् ।
यस्ता घटना न्यूनीकरणका लागि प्रहरीको मात्रै जिम्मेवारी हुन्छ कि अरुको पनि हुन्छ ?
प्रहरीले जबरजस्ती करणीलाई विशिष्ट प्रकारको अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यो अन्य हिसाबको अपराध जस्तो होइन । परिवारभित्र नै पीडित र पीडक हुने घटना ज्यादा हुन्छ । यस्तै, शिक्षकबाट विद्यार्थी, बाबुबाट छोरी, साथीबाट साथी, चिनजानको मान्छेबाट बालिकामाथि जबरजस्ती करणी भएका छन् । कतिपय उजुरी त पतिविरुद्ध पत्नीका पनि आउने गरेका छन् । विशिष्ट सम्बन्धभित्र हुने घटना भएकाले यस्ता घटना न्यूनीकरणमा प्रहरीसहित समाजका सबै तप्काको भूमिका उत्तिकै हुन्छ।
हरेक वर्ष बलात्कारको ग्राफ बढिरहेको हुन्छ, यसलाई देखाएर प्रहरीले काम गरेन भन्ने विषयसँग तुलना गर्दा कस्तो लाग्छ ?
बलात्कारको तथ्यांक उजुरीका आधारमा आउने हो । यसलाई सकारात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने समाजको चेतनास्तरमा आएको परिवर्तन पनि मान्न सकिन्छ । खासगरी महिला दिदीबहिनीमा प्रहरीकहाँ उजुरी दिनुपर्छ, पीडामा बस्नुहुन्न भन्ने जागरण पनि बढ्यो । यसकारण यो ग्राफ बढेजस्तो देखिन्छ । तर यसले पीडकलाई सजायको भागीदार बनाएको उदाहरण त मैले माथि नै भनिसकेको छु ।
फेरि बलात्कारका कतिपय घटनामा मिलापत्र, अनुसन्धानमा कमजोरीका रुपमा प्रहरी अधिकारी पनि मुछिएका छन्, यसलाई अलग्याएर व्याख्या गर्न मिल्ला र ?
प्रहरी संगठनका कुनै पनि कर्मचारी मिलापत्र वा यस्ता घटनाको साक्षी बनिदिने कामलाई नीतिगत तहदेखि नै कडाइका साथ हेरिएको छ । प्रहरी कर्मचारीको संलग्नता हुँदैन भन्ने छैन, विभिन्न समयमा २ हजार २ सय ६६ जनालाई विभिन्न विषयमा संलग्न भएको अभियोगमा विभागीय कारबाही पनि भइसकेको छ ।
प्रहरीको अहिलेको नेतृत्व यस्ता विषयमा गम्भीर छ । मातहतका सबै निकायमा कडाइका साथ जबरजस्ती करणीजस्ता विशिष्ट मुद्दालगायतका प्रहरीको मिलापत्र गराउने वा अन्य कुनै पनि प्रकारका समझदारीको साक्षी बस्ने काम नगर्नू भन्ने कडा आदेश छ ।
कसरी बढ्छन् यस्ता घटना ?
घटनाको ग्राफलाई नियाल्ने हो भने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, अभिभावकत्वविनाको परिवार र छोराछोरी, टिनएजर्सहरूको म्याचोर्ड साइटसम्मको सुलभ पहुँच यसका कारण देखिन्छन् । कतिपय अवस्थामा परिवारभित्र पतिविरुद्ध पत्नीका पनि बलात्कारका उजुरी देखिन्छ । यसर्थ, अभिभावकले आफ्ना सन्तानको गतिविधि, शंका लागेका विषयमा गहन निरीक्षणलगायतका काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । विशिष्ट प्रकारको यस्ता घटना प्रहरीमा भएपछि आउँछन् तर हुनुअघि वा घट्नुअघि स्वयंले पनि आफू कसरी सुरक्षित हुने भन्ने सन्दर्भमा बुझ्न र अरुलाई बुझाउन आवश्यक देखिन्छ ।
सुरक्षाका लागि २१ हजार ४४१ स्थानमा सिसी क्यामरा आवश्यक